Kooxaha LinkedIn ee Guusha iibka | Martech Zone
Kooxaha LinkedIn ee Guusha iibka
Sabti, Febraayo 22, 2014 Axad, Janaayo 15, 2017 Douglas Karr
LinkedIn waxay muddo dheer ahayd isha adag ee ganacsiga ganacsatada ganacsiga iyo waaxaha iibka si loo helo oo loola xiriiro rajadooda iyo macaamiishooda. Sidoo kale waa barxad aad u wanaagsan oo lagu daro istaraatiijiyadaada waxyaabaha aad ka kooban tahay. Taladeenu waxay muddo dheer u ahayd iibinta iyo xirfadlayaasha suuqgeynta inay ahaadaan halka ay dhagaystayaashu joogaan is in dhagaystayaasha badiyaa laga heli karo Kooxaha Isku Xirka.
Kooxaha LinkedIn waxay meel siiyaan xirfadlayaal isla warshadda ah ama dano la mid ah leh si ay ula wadaagaan waxyaabaha, u helaan jawaabo, u dhajiyaan una eegaan shaqooyinka, ula xiriiraan ganacsi, iskuna dhisaan inay yihiin khubaro warshadeed. Waxaad ka heli kartaa kooxo aad ku biirto adoo adeegsanaya astaamaha raadinta dusha sare ee boggaaga ama daawashada soo jeedimaha kooxaha aad jeceshahay. Waxaad sidoo kale abuuri kartaa koox cusub oo diirada saareysa mowduuc gaar ah ama warshado.
Xogtani waxay qeexaysaa sida kooxaha LinkedIn ay ugu rogi karaan hubkaaga qarsoodiga ah guusha iibka!
Tags: b2bganacsiga ganacsigaLinkedInkooxaha isku xidha
Saadaalinta 2014 ee Isbeddellada Websaydhka Wareegtada ah
Feb 24, 2014 markay ahayd 5:11 PM
Farriin weyn Doug, Waxaad isku dubariday [infographic] aad u fiican. Mid ka mid ah aagagga aan dusha ka eegay waa qaybta xaaladda. Halkee dhab ahaan taasi ku taal?
Mar 18, 2014 at 6: 37 AM
Blog Weyn ,,, isku xirnaanta ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa dhisidda xiriirka macaamiisha iyo wadahadal kooxeed oo ku saabsan dhinacyo kala duwan.
Mar 18, 2014 at 6: 45 AM
Waan kugu raacsanahay..dhammaan horseedyada ayaa muhiim u ah fuliyayaal kasta oo horumarineed oo horumarineed urur iyo isku xirnaansho ayaa ka caawin doonta iyaga in badan oo ka mid ah waxaan heli karnaa xirfadlayaal ganacsi oo kala duwan oo aan kula xiriiri doono iyaga isla markaana dhiirrigelin doona wax soo saarka ganacsiga.